China 1390 CO2 Laser Engraver ye Acrylics, Fabric, Jeans, Leather Manufacturer uye Supplier |Apex
1390 CO2 Laser Engraver yeAkriliki, Mucheka, Jeans, Dehwe
#Yakatanhamara yekucheka muchinjiko chikamu, yakanyanya kurongeka, kugadzikana kwakanaka, kugutsa maitiro ekudiwa kwezvikamu chaizvo.Dynamic performance yakagadzikana, inokwanisa kushanda kwenguva yakareba.
#Inokwanisa kucheka zvese zvisiri-simbi nesimbi, inokwanisa kucheka simbi isina tsvina, kabhoni simbi, acrylic nehuni, nezvimwe.
#Laser yekucheka musoro ine auto inotarisa system.Laser yekucheka musoro inogadzirisa kureba kwayo padivi pesimbi pepa, kuve nechokwadi kuti yakatarisana nehurefu hunoramba hwakafanana nguva dzese.Smooth yekucheka mupendero, hapana chikonzero chekupukuta kana kumwezve kubata.Mashizha esimbi akatsetseka uye ane wavy anogona kutemwa nemuchina uyu.
Affordable laser engraver inogona kushandiswa kucheka, etching uye kunyora ganda, machira, machira, bepa, jeans, faibha uye zvimwe zvinochinjika zvinhu.Ikozvino iyo yakachipa laser engraver inotengeswa nemutengo unokwanisika.
Zvimiro zvelaser engraver yeDehwe, Mucheka, Jeans, Pepa
1. Kugadzikana kwepamusoro uye simba guru rekugadzira mechanical rakakandwa nepamusoro-soro yemuenzaniso inogona kuvimbisa kugadzikana kwekufamba kwedata, kukurumidza kukurumidza, kururamisa kwakanyanya, kushanda kwenguva refu pasina kugadziriswa uye kuveza kwakafanana.Iro zano rekugadzira rakatenderedza muviri kuburikidza rinogona kuwedzera zvinhu kubva kumberi uye kumashure izvo zvezvisingaperi workpiece.
2. Misoro miviri laser engraver inotora advanced DSP digital control system, international standard laser power supply, integrated framework style, kugadzikana kwepamusoro, high-speed USB 2.0 interface inobuda inogona kutsigira off-line kushanda.
3. Tumira mafaira zvakananga kubva kuCoredraw, AutoCAD.
4. Kugadziridzwa kwekugadzirwa kwemagetsi uye magetsi, ruzha rwakaderera.
5. Simba guru uye yakakwirira kugadzikana kwelaser tube, lens inotengeswa kunze uye girazi, hupenyu hurefu.
6. Yakatorwa kunze njanji yakatsetseka uye matepi emhando yepamusoro yekutapurirana, shongedza kukurumidza-pasi chimiro, kuve nechokwadi chemhando yepamusoro uye yakanyanya kugadzikana yekucheka.
7. Otomatiki kumusoro-pasi tafura, rotary mudziyo, red dot chinzvimbo, Z axis yesarudzo.
Zvishandiso zveLaser Engraver yeJeans, Leather, Fabric, Pepa
Zvishandiso Zvinoshanda:Dehwe, machira, machira, jira, girazi, organic girazi, acrylic, huni, MDF, PVC, plywood, mepu shizha, kaviri-ruvara bhodhi, bamboo, plexiglass, bepa, marble, ceramics, nezvimwe.
Applicable Industries:Monument/Gravestone/Tombstone indasitiri, indasitiri yembatya, indasitiri yemodhi, modhi yekuvaka, ndege uye modhi yekufambisa uye matoyi emapuranga, kushambadza, kushongedzwa, hunyanzvi, hunyanzvi, zvemagetsi nemidziyo yemagetsi, nezvimwe.
Technical Parameters yeLaser Engraver yeDehwe, Pepa, Mucheka, Jeans
Nzvimbo Yekushanda 1300mm*900mm
Laser Simba 60W (80W, 100W, 130W, 150W yesarudzo)
Laser Type CO2 girazi laser chubhu
Inoenderana Software LaserWorks V8
Position System Dot dzvuku
Tsigira Graphic Format AI, PLT, BMP, DXF, nezvimwe.
Driving Mode Stepper mota
Cooling Mode Circulation mvura kutonhora
Venting Attachments Air exhaust fan ine venting chubhu
Kushanda Voltage AC 110 - 220V
5 × 10 Hypertherm Plasma Cutter yeSheet Me...
6090 Laser Nguo Yekucheka Machine ine CCD Kamera
High Speed ​​3D Crystal Laser Engraving Machine f...
4 Axis CNC Foam Cutter 2021 inopisa kutengesa